Isicoci esithobekileyo sesinye sezona zixhobo zokucoca izindlu ezisetyenziswayo namhlanje. Uyilo lwayo olulula kodwa olusebenzayo luyisusile into yokuba kufuneka lucoce uthuli kunye namanye amasuntswana kwiindawo ezingaphezulu ngesandla, luze lucoce indlu ukuba ibe ngumsebenzi osebenza ngokukhawuleza nangokukhawuleza. Ingasebenzisi nto ngaphandle kokutsala, inkunkuma isusa ukungcola kwaye igcinelwe ukulahlwa.
Asebenza njani la maqhawe asekhaya?
Eyona ndlela ilula yokuchaza ukuba isicoci sokucoca unokuyifunxa njani inkunkuma kukucinga ngayo njengendiza. Xa uthatha isiselo ngomphunga, isenzo sokumunca sidala uxinzelelo lomoya ngaphakathi kwengca: uxinzelelo olusezantsi kunaleyo yomoya ojikeleze indawo. Njengakwiifilimu zasemajukujukwini, apho ulwaphulo kwindawo yesiphekepheke lumunca abantu emajukujukwini, isicoci sokucoca umoya senza uxinzelelo olubi ngaphakathi, olwenza ukuba umoya ungene kuwo.
Isicoci sokucoca sisebenzisa imoto yombane ejikeleza ifeni, incanca emoyeni- kunye nayo nayiphi na amasuntswana amancinci abanjwe kuyo-kwaye uyityhalele kwelinye icala, ibhegi okanye ibhokisi, ukwenza uxinzelelo olubi. Unokucinga ukuba emva kwemizuzwana embalwa ingayeka ukusebenza, kuba unokunyanzela umoya omninzi kwisithuba esivaliweyo. Ukuyicombulula le nto, i-vacuum ine-port exust ekhupha umoya kwelinye icala, ivumela i-motor ukuba iqhubeke nokusebenza ngokwesiqhelo.
Umoya, nangona kunjalo, awugqithisi nje uze uphume kwelinye icala. Kuya kuba yingozi kakhulu kubantu abasebenzisa i-vacuum. Ngoba? Ewe, ngaphezulu kobumdaka kunye nobumdaka obufunxwayo, iqokelela amasuntswana amahle kakhulu aphantse angabonakali emehlweni. Ukuba ziphefumlelwe ngokwaneleyo ngokwaneleyo, zinokubangela umonakalo emiphungeni. Kuba ayizizo zonke la masuntswana abanjelwe yingxowa okanye ngebhotile, isicoci sokucoca umoya sidlulisa umoya ubuncinci kwisihluzi esinye esicocekileyo kwaye sihlala sisihluzi seHEPA (Ukusebenza okuPhezulu okuPhetheyo okubamba) ukususa phantse lonke uthuli. Kuphela ngoku kukhuselekile ukuba umoya uphefumle kwakhona.
Amandla esinto sokucoca amachiza akamiselwanga nje ngamandla enjini, kodwa kunye nobukhulu bezibuko lokungenisa, icandelo elifunxa ukungcola. Ubuncinci ubungakanani bokutya, amandla okutsala aveliswa ngakumbi, njengokucinezela isixa esifanayo somoya kwisithuba esincinci kuthetha ukuba umoya kufuneka uhambe ngokukhawuleza. Esi sesona sizathu sokuba kufakelwe isicoci esicocekileyo esinamazibuko amancinci, amancinci amancinci abonakala ngathi anokufunxa okuphezulu kunelikhulu.
Zininzi iintlobo ezahlukeneyo zokucoca, kodwa zonke zisebenza kumgaqo ofanayo wokudala uxinzelelo olubi usebenzisa ifeni, ukubamba ukungcola okufunxwayo, ukucoca umoya wokukhupha kunye nokuwukhulula. Umhlaba ubuya kuba yindawo emdaka ngaphandle kwabo.